APFS ichave ichiwanikwa pane akaomarara anotyaira uye Fusion Dhiraivhu mune macOS Mojave | Ndinobva mac
Javier Porcar | | MacOS Mojave, dzakawanda
Apple's new operating system iyo ichave inowanikwa kune veruzhinji kubva munaGunyana. MacOS Mojave ichaunza pakati pezvimwe zvinyorwa kuiswa kweAPFS faira system muFusion Drive disks, asiwo muMechanical Hard Disks.
Iye zvino edu ese madhiraivha akaomarara, emukati nekunze, anozobatsirwa nezvakanaka zvese zvine APFS uye zvakauya kuMacs muHigh Sierra, asi chete kune SSD inotyaira Iyi faira sisitimu yakanga yamboedzwa pane inotakurika drive mashandiro masystem senge watchOS, iOS, kana tvOS.
Zvinotarisirwa kana uchiisa macOS Mojave tibvunze kana tichida kushandura mafomati emadhisiki kubva kuHFS + kuenda kuAPFS. Uku kumisikidza kunotora nguva yakareba kupfuura kuisirwa wenguva dzose, sezvo sisitimu yacho ichizofanira kuchinja fomati. Iwo mashiripiti eApple achaita zororo, nekuti hapana data rakarasika mune ino shanduko yemhando.
Kune rumwe rutivi, iwo madhiraivha matsva achave aine zvese zvitsva zveiyi Apple faira system. Sisitimu bhutsu inofanirwa kukurumidza muAPFS. Uye zvakare, chero application inovhura nekukurumidza neiyi faira system, pamwe nesarudzo dzekuteedzera nekuteedzera mafaera. Muchokwadi, iri basa sezviri pachena rinongoerekana raitika mukati medhisiki rakaomarara pacharo, kunyangwe izvo chaizvo zvinoita nesystem ibasa kumashure.
Kana iwe wanga uchifunga nezve kutenga memory disk, zvinogara zviri nani kuitenga mune SSD fomati nekuda kwekumhanya kunotaurwa neizvi, asi chero zvodii, tichaona kana mashiripiti eApple anosvika kune ekunze akaomarara madhiraivha, kwatinako Ruzivo rwakawanda: mifananidzo, mavhidhiyo, zvinyorwa zvemarudzi ese, izvo nhasi zviri nani muHFS + uye zvinotibvumidza kuti tizvishandure zvive APFS pasina zvakanyanya kuyedza.
Chero zvazvingaitika, izvi zviito zvinowanzochengetwa neApple kusvika miniti yekupedzisira, uye hatisi kuzozviona kusvika pakubuda kweMacOS Mojave.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » APFS ichave ichiwanikwa pane akaomarara anotyaira uye Fusion Dhiraivhu mune macOS Mojave